Madaxweyne Xasan oo xalay ku dheelmaday saldhigyo boolis iyo goobo ganacsi (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kormeeray 3 ka mid ah saldhigyada booliska degmooyinka gobolka Banaadir, isagoo dhanka kale socod ku maray wadada Maka Almukarrama.
Sidoo kale, madaxweynuhu waxa uu kormeer ku tagay saldhigga degmada Waaberi, isagoo soo indha indheeyey qeybaha saldhigga mar kalena su’aalo weydiiyey taliyhii saldhigga, waxa uuna ugu dambeyn ku dhiirageliyey in ay sii laba jibaaraan ilaalinta amniga, shacabka.
Dhanka kale, madaxweyne Xasan ayaa xalay lug ku soo maray waddada dheer ee Maka Al-Mukarama, waxa uuna halkaasi kula kulmay dad Soomaaliyeed oo saqdii dhexe ku sugnaa goobahooda ganacsiga, kuwaas oo si weyn u muujiyey farxadda la xiriirtay in ay la kulmaan madaxweynaha dalka, Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa salaamay dadweyne ganacsiyo ku lahaa hareeraha wadada Maka Almukarrama iyo kuwa kale oo dukaameysanayey.